September 2019 - ThutaStar
September 9, 2019 Thuta Star 0
အေသင်ချိုဆွေကတော့ ဆယ်ကျော်သက်လောက်တည်းက ပရိသတ်ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေထဲက အဆိုရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့အဆိုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။နှစ်အနည်းငယ်လောက်အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်ပဲပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့် Single Mother အဖြစ်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပရိသတ်တွေရှေ့ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားပြန်လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့ကတော့ အေသင်ရဲ့(၂၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပဲ ဖြစ်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေ မိတ်ဆွေတွေ များစွာ […]
ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျောင်းသားများအတွက် သိန်း(၈၅၀၀)ထိ ထောက်ပံ့ပြီးခဲ့ပြီတဲ့…
နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ ပြေတီဦးနဲ့ အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့က အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာထူးချွန်သလို စိတ်သဘောထားပြည့်ဝတဲ့ ဇနှီးမောင်နှံ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က ပြေတီဦး ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုပြီး ပညာသင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့မှာတော့ […]
ဖုန်းလွတ်​ကျပြီး မှန်​မကွဲ​သွားလို့ ဖုန်းပြင်ဆိုင်သွားလိုက်သောအခါ ….
ဖုန်းလွတ်​ကျပြီး မှန်​မကွဲ​သွားလို့ ဖုန်းပြင်ဆိုင်သွားလိုက်သောအခါ တ​စ်​​နေ့က​ပေါ့ ဖုန်းလွတ်​ကျသွားလို့ မှန်​မကွဲ​လေးက အပ်​ရာထင်​သွားတယ်​ ဒါနဲ့ပဲ …..ဖုန်းဆိုင်​မှာ သွားပြီး အသစ်​လဲမလို့အသွား ရိုးသားလှတဲ့ သာမာန်​အလုပ်​သမား ​တောသူ​တောင်​သား သားအမိနှစ်​​ယောက်​နဲ့ ဆုံမိတယ်​။ ကျွန်​​တော်​ဆိုင်​​ရှေ့​ရောက်​​​တော့ မိခင်အို​တစ်ဦး​နဲ့ ​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ပြောင်းဖူး​တွေ အပြည့်​တင်​ထားတဲ့ စက်​ဘီးတစ်​စီးကို နှစ်​ဖက်​ထိန်း တွန်းလာပြီး ဆိုင်​​ရှေ့မှာလာရပ်​တယ်​။ […]
ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကနေ တစ်နှစ်ကို သိန်း(၂၀၀)လောက်ရနေတဲ့ (၁၄)နှစ်သားလေး ….
နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ကလေးလေးတွေ ပိုက်ဆံတွေ သိန်းချီဝင်နေတဲ့ ကိစ္စက နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းနေပါတယ်။ သာမန်လူကြီးတွေမလုပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ တီထွင်နေနိုင်တာဖြစ်ပြီး၊ ပိုက်ဆံတွေကို သိန်းရာချီရနေတာပါ။ အပန်းပြေက ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမဲ့ အတုယူဖွယ် လူငယ်လေးရဲ့အကြောင်းကတော့ မလေးရှားဆယ်ကျော်သက် နည်းပညာပညာရှင် Muhammad Akmal Hazim ဆိုတဲ့ […]
ဖခင်က သမီးကြီးကို သားမယားကျင့်နေစဉ် သမီးငယ်က ချောင်းကြည့်သောအခါ ….
ဖခင်က သမီးကြီးကို သားမယားကျင့်နေစဉ် သမီးငယ်က ချောင်းကြည့်သောအခါ… နေ့ညမပြတ်အရက်မူးနေသည့် ဖခင်ဖြစ်သူက အသက်(၉)နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းဖြစ်သူအား သားမယားအဖြစ် အဓမ္မပြု့ကျင့် သတင်း + ဓာတ်ပုံ = ကိုတိုးကြီး မုံရွာ မတ် ၁၅ ဖခင်က သမီးကြီးကို သားမယားကျင့်နေစဉ် သမီးငယ်က ချောင်းကြည့်သောအခါ..(စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့နယ်) […]
ရှားပါးစာရင်းဝင် ချစ်သူလက္ခဏာ (၅) မျိုး … တွေ.ရင်လုံးဝ လက်လွတ်မခံပါနဲ့ ….
ရှားပါးစာရင်းဝင် ချစ်သူလက္ခဏာ (၅) မျိုး … တွေ.ရင်လုံးဝ လက်လွတ်မခံပါနဲ့ အချစ်စစ် ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါးလာတာနဲ့ အမျှ သင့်ကို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ချစ်တဲ့သူ၊ ဘာအကျိုးကိုမှ မမျှော်ကိုးပဲချစ်တဲ့သူ၊ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တဲ့သူဆိုတာ တကယ်ကို ရှားပါးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခုဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေနဲ့ […]
နေမကောင်းလို့ ဓာတ်မှန်ရိုက်မှ ပင်လယ်စာဆို အစိမ်းလေးမှ စားပါရစေဆိုတဲ့သူ၊ သွေးပျက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်…
တရုတ်နိုင်ငံမှာ နောက်ဆုံးဟော့ဖြစ်နေတဲ့ သတင်းကတော့ အပန်းပြေပရိသတ်ထဲက ပင်လယ်စာ အစိမ်းကြိုက်သူတွေအတွက် မဖြစ်မနေဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာပါ။ ပင်လယ်စာကို အစိမ်း (၃)နှစ်ဆက် စားခဲ့ပြီးနောက်မှာ အသည်းဟာ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေ ကြုံနေခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နာမည်ကြီး သတင်းဌာန ET Today ရဲ့ ဖော်ပြချက်ကို အပန်းပြေက ဖတ်ရှုမှုအရ […]
စုံတွဲဓာတ်ပုံတွေကို နေ့တိုင်းတင်ပြီးဘဝခြားသွားတဲ့ချစ်သူကို လွမ်းဆွတ်နေတဲ့ မော်ဒယ်မလေး
အချစ်စစ်တို့သွားရာလမ်းဟာဖြောင့်ဖြူးခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလိုပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင် အနှောက်အယှက်လောကဓံတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ ဝင်စမြဲပါပဲ။ကံကောင်းတဲ့ချစ်သူတွေကတော့ လာသမျှအခက်အခဲတွေကိုချစ်သူလက်ကိုတွဲပြီးဖြေရှင်းခွင့်ရပြီး တစ်သက်လုံးအတူလက်တွဲသွားနိုင်ကြပေမယ့်ကံဆိုးတဲ့ချစ်သူတွေကတော့ သေကွဲဒါမှမဟုတ် ရှင်ကွဲဆိုတဲ့ ချောက်ကမ်းပါးကြီးထဲကို တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းကျရောက်သွားကြရပါတယ်။ အဲဒါက ဖိလစ်ပိုင်မော်ဒယ်မလေး Nam Floresca နဲ့သူ့ချစ်သူ Fraco Hernandez အတွက်တော့ သေကွဲဆိုတဲ့ကံဆိုးမှုကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Nam နဲ့ Franco တို့ဟာအချိ်န်တွေအကြာကြီးချစ်လာကြတဲ့ စုံတွဲလေးဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် […]
Vape သောက်တဲ့ လူငယ် ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး ဆေးရုံတက်နေရ ….
အီးစီးကရက်(Vape) ဟု လူသိများသည့် ဆေးလိပ်အစားထိုး အီလက်ထရောနစ် ဆေးတံသောက်သုံးသူ လူငယ်အများစု အဆုတ်ထိခိုက် ဒဏ်ရာများနဲ့ ဒါဇင်နဲ့ချီကာ ဆေးရုံတက် ကုသမှုခံယူနေရသည့်အပေါ် အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ စတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း Vape သောက်သုံးပြီးနောက် ထူးဆန်းသော နာဖျားမှုများ လူငယ်အများစုမှာ ဖြစ်နေခဲ့ပြီး အခုလို စုံစမ်းမှုများကို […]
ချစ်သူဘဝထဲက ဆဲတတ်တဲ့ ယောက်ျားဟာ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ မိသားစုကို ဆဲပါလိမ့်မယ်
ချစ်သူဘဝထဲက… ဆဲတတ်တဲ့ ယောကျာင်္းဟာ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ မိသားစုကို ဆဲပါ လိမ့်မယ်။ အရက်သောက်တဲ့ ယောကျာင်္းဟာ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ မိသားစုရှေ့ ဆက်သောက်နေမှာပါဘဲ။ လောင်းကစား တပ်မက်တဲ့ ယောကျာင်္းဟာ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ မိသားစု စီးပွားရေး ထိခိုက်တဲ့အထိ ပြုလုပ်နေမှာပါဘဲ။ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲတတ်တဲ့ ယောက်ကျာင်္းဟာ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ ဆက်ပြီး […]